ပန်ဒိုရာ: ထားရစ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ နဲ့ ရှေ့ဆက်တိုးမယ့် ၂၀၀၉
Posted by pandora at 10:13 PM
ရေးသမျှ အားလုံးကို အားပေးနေတာပါ...
Essay တိုလေးတွေကိုတော့ အနှစ်သက်ဆုံးပါဘဲ...
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် စက်ဘီးကလေးတို့ ... လွယ်အိပ်ကလေးတို့လို Essay မျိုးလေးတွေ များများဖတ်ချင်ပါတယ်...
မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ပါ ပန်ပန်။
NY resolution က သိပ်များသွားရင် စိတ်ညစ်စရာ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ချကို မချဘူး ဟိ။
“ဘာရေးရေး မကြိုက်ဘူး” ဆိုတဲ့ လူ ရှိသေးတာ အံ့ပ။ ကိုယ်တော့ သတ္တိ မရှိလို့ ဒီလို poll မျိုး မလုပ်သေးပါ ဟဲဟဲ။
၂၀၀၉ မှာ ပို့စ်များများ (ရေးချင်နေတဲ့) ရေးနိုင်ပါစေ ပန်ပန်။
ဒေါ်ပန်ရေ.. ရေးချင်တာ စိတ်ထဲပေါ်တာရေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ... အက်ဆေး ဆောင်းပါး လိုကိုတော့ ပိုဖတ်ချင်တာပေါ့..
မစ္စပန်ဒိုရီ ရေးချင်တာရေး အဟေ .. ဟေ..ဟေးးးးးးးးး ဒူကဘာတော့ နှစ်သစ်မှာ ရန်သူနဲ့ မိတ်ဆွေ လူလုံးပိုကွဲလာတယ်၊ ကျေးဂျူးကဘာ ပေါ့ ၂၀၀၈....?
ဒေါ်လေးကလည်း အဲ့တာ စတင်တည်းက ဘာရေးရေးမကြိုက်ဆိုတာ မထည့်လိုက်နဲ့ပေါ့ =) အဲ့တာဆိုရှင်းကော ။ ကျနော်တော့ အက်ဆေးလေးတွေ နောက်တော့ အရိုး လိုမျိုး ကဗျာလေးတွေ ကြိုက်တယ် ဘာသာပြန်တွေလည်းကောင်းတာပဲ ဘာရေးရေးကြိုက်ပါတယ် ။
ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်၊ ကိုယ့်ခံစားချက်၊ ကိုယ့်အတွေးတွေရဲ့
ထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ ဘလောဂ့်ရေးတာကို ပုဂ္ဂလိက ဆန်ဆန် ပြောရရယ်
ဒါမှလည်း ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ပြုပြင်နိုင်မှာပါ။
ကိုယ်ရေးတဲ့စာကို ကိုယ့်ခံစားချက်ကို လူတိုင်းကို သိစေချင်တယ်
ကိုယ်ဖတ်ခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတလေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးချင်တယ်
ကိုယ့်စာကြောင့် စာဖတ်သူအတွက် တစ်ခုခု အမှတ်ရစရာ၊ အသုံးတည့်စရာ ဖြစ်သွားရင်
နက်ပေါ် အချိန်ကုန်ရကြိုးနပ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ တွေးမိပါတယ်
ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဆက်လက် blogging နိုင်ပါစေလို့ .. ..
ဘာကို ပိုရေးစေချင်သလဲ ဆိုတဲ့ အမေးအတွက်.. ရေးချင်တာရေး ကို ရွေးပါတယ်..။ ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်ကို ချုပ်နှောင်ချင်တဲ့ စိတ်မရှိလို့ ပါ..။
ဘာကို ပိုဖတ်ချင်သလဲလို့မေးခဲ့ရင်တော့ မပန်ရေးတဲ့ ၀တ္ထု.. ကဗျာ နဲ့အက်ဆေးတွေကို ပိုဖတ်ချင်ပါတယ်..။
ရွေးခိုင်းတုန်းက လုံးဝမရွေးဘဲ အချိန်လွန်မှ ထအော်တဲ့ လေးမကို မပန် ခွင့်လွတ်ပါ..။
မသက်ဝေရေ အက်ဆေးလေးတွေကို စိတ်ကြည်လင်တဲ့အခါတိုင်း ရေးဖို့ ကြိုးစားပါမယ်။
မနုစံရေ.. ဟုတ်တယ်။ ဒါကြောင့် resolution ရယ်လို့တော့ မသတ်မှတ်ချင်ပါဘူး။ poll ကတော့ တရားအောင်လို့ အစုံထည့်ပေးထားတာပါ။
မီယာ.. ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ်။
(ကို၊ မ) ဇနိ.. ကျေးဇူးပါနော်
ကိုဒူကဘာရေ.. ရန်သူတွေ မိတ်ဆွေဖြစ်လာမလားလို့.. ရန်သူလည်း ရှိချင်ဘူးဗျာ။ :D
ကိုအောင်သာငယ်. ကိုဆောင်းယွန်းလ..မောင်မျိုး ကိုဝင်းဇော် အိန္ဒြာ.လေးမ .. လာအားပေးကြတာ ကျေးဇူးပါနော်။
သီတာ ကဗျာလေးတော့ သိမ်းထားပါရစေ